Date My Pet » Ahoana no To Manana-miasa Mahavariana Date First
Ahoana no To Manana-miasa Mahavariana Date First
Last nohavaozina: Jan. 21 2021 | 5 min namaky
Ny daty voalohany dia mety ho henjana ny fotoana ho an'ny roa tonta. Tsy mahafantatra izay hitranga, na dia efa niteny tamin'ny olona an-tserasera, na an-telefaonina, ary angamba mihevitra fa tena fantatrao tsara izy ireo, Matetika ny ankamaroan'ny olona mba hatahotra eo anoloan'ny daty voalohany. Ka eto misy toro-hevitra mba manana daty voalohany lehibe.
Ataovy fohy ny daty voalohany - Satria daty voalohany dia afaka ny ho henjana kely dia mety tsara mba ho fohy sy ny mamy. Fomba izany dia afaka manana fotoana be miaraka ary hahavita amin'ny avo. Na dia tena mety ho mifandray rehefa Niady hevitra an-tserasera, izany dia mety ho samy hafa tanteraka rehefa mihaona amin'ny olona, ary tsy fantatro hoe ahoana no handeha hiakatra mandra-mandany fotoana aminy eo amin'ny tena fiainana. Ka mitondra izany ao an-tsaina foana ny daty voalohany fohy.
Amin'ny fanaovana izany fomba izany, raha tsy mahatsiaro ho mahazo aina miaraka aminy dia afaka miala aloha. Na izany aza raha NY tena toa azy ireo, dia zava-dehibe ihany koa ny hitandrina ny daty fohy. Ny fahadisoana lehibe ny olona manao rehefa miaraka izy ireo dia ny tsy mandany fotoana be loatra miaraka haingana koa. Na dia ara-dalàna ny Te handany fotoana miaraka rehefa nifankahazo, dia hamela ny fifandraisana mba hampitombo ho azy kokoa raha miforona moramora kokoa ny fotoana. Fomba izany dia afaka hahafantatra ny hafa tsikelikely. Koa dia samy lanja bebe kokoa raha tsy dia misy zo am-piandohana. Healthy olona misaraka foana ny fiainany ary koa ny manokana fotoana mampiaraka.
Mitondra izany ao an-tsaina tsy fanaovana sakafo hariva famandrihan-toerana ho daty voalohany. Raha toa ka mba ho mahatsiravina (ary afaka) dia tsy maintsy mipetraka amin'ny alalan'ny iray ora, fara fahakeliny, matetika intsony, amin'izy ireo, na ho tena mahalala fomba ny hiala aloha.
Manao zavatra amin'ny tanana sy ny voly - Na dia ny zava-pisotro ao amin'ny bar dia safidy mahazatra ho daty voalohany dia tsy izay rehetra inventive. Koa dia mety ho kely mafy ny handrava ny ranomandry rehefa mipetraka manerana avy amin'ny tsirairay eo amin'ny toerana ôfisialy. Toy izany koa ny kafe fihadiana grabbing mety ho safidy tsara ho an'ny daty voalohany satria mailaka sy mora, na izany aza raha tena te-hanao fahatsapana nahoana no tsy mandeha ny zavatra tsy mahazatra sy ny tanana amin'ny tokony. Hifidy ny zavatra izay manao asa iray miara-, mainka tanana amin'ny tsara kokoa toy izany afaka manampy mamaky ny ranomandry. Ohatra tsara dia miara-mahandro, nandeha an-tongotra tao amin'ny toerana tsara tarehy, tanimanga na zavatra izay tsy maintsy miara-miasa. Tsy ho vita ny tsindry eny ny roa aminareo rehefa manao zavatra dia miara-. Dia mamela ny toetra ho tonga amin'ny alalan'ny ho azy kokoa, fa tsy ny daty nitodika ho any an-'tafatafa' manerana ny latabatra, izay mety hitranga matetika rehefa mivory ao amin'ny fisotroana.
Aoka ho azo antoka - Tsy maintsy ho anisan'ny iray dater ny Mantra, tokan-tena indrindra indrindra ho an'ny vehivavy. Dia tsy lazaina fa tsy maintsy foana fiarovana ao an-tsaina, ary misafidy mba hihaona amin'ny toerana ho an'ny besinimaro amin'ny fotoana voalohany mihaona olona. Tsy mitovy hevitra ny handeha ho an'ny sakafo hariva tao an-tranony. Na dia tsara tsapanao fantatrao olona tsy hiresaka an-tserasera, tena tsy afaka hilaza ny fomba mendri-pitokisana misy olona mandra-niaraka tamin'izy ireo. Koa, tena ny fifantohana ho ny fahaizanao maminavina ny (tsara ny Fahaizana Voajanahary). Izany no mba hiaro anao sy matetika ny fahaizanao maminavina ny hilaza aminao rehefa misy zavatra na olona tsy mahatsapa marina. Mahahaino izany, ary nataony azo antoka foana aloha.
Aoka ho azo antoka fa ao amin'ny toe-tsaina tsara eo anatrehanao mandeha manao daty - olona maro fotsiny ny daty mahitsy avy niasa, ary raha mbola tsy misy maharatsy izany dia zava-dehibe mba hahazoana antoka fa asehonao ao amin'ny toe-tsaina tsara noho ny daty. Raha toa ka ny lohany dia mbola eo amin'ny 'manao' lisitra dia tsy ho mahafinaritra ny daty! Toy izany koa fa raha miady saina miverina izy, tsy faly sady moaning dia tsy ho Tsara avy Hatrany fahatsapana. Makà minitra vitsivitsy haka aina sy manomana ny tenanao eo anatrehanao lohan'ny eny amin'ny daty. Haka lalina fofon'aina, ary ny fialam-boly manao fanatanjahan-tena raha mety. Omano ny sainao - sary an-tsaina ny fomba tianao ny daty handeha. Na dia aza mandeha mivantana avy niasa no afaka hanao izany raha eo amin'ny fiara fitateram-bahoaka.
Ny vehivavy sasany mandany ora maro efa vonona ara-batana, fa aza mandany fotoana ny fanomanana ara-tsaina. Na dia tsara mba ho azo antoka fa ianao no matoky amin'ny tarehy, mandany ora maro amin'ny mety tena manampy ny fanerena. Fa tsy mandany ela fotsiny mba hijery marani-tsaina ny tenanao sy mahatsapa tsara, dia ny manokana fotoana kely ihany koa ny fanomanana ny sainao. Ny tena tsara dia mandeha manao daty ary somary nahatsapa upbeat tony tsara ny andro. Mety ho tsara ny hilalao mozika sasany ianao raha miomana ary aza manana dihy manodidina ny efitrano. Rehefa avy nilaza ny tsy hanafoana ny daty raha tsy ao amin'ny toe-tsaina tonga lafatra, na raha toa ianao natahotra. Matetika ianao indray mandeha miala ny trano sy ny daty dia miala sasatra sy miala voly.
Mijanòna ho ianao ihany - Indraindray rehefa mandeha amin'ny daty voalohany fa tsy ny tenany. Hanova ny toetrany izy ireo mba hiezaka hampiaiky volana ny olona hafa. Angamba ny selam-pitatitra mba hahazo tsara kokoa ny azy sy ireo fihetsika farany Hafahafa ihany, miezaka mafy loatra, clamming ka na mametraka eo amin'ny anoloana mba hanafina ny selam-pitatitra. Izany no tanteraka tsy ilaina, ary afaka manisy ratsy ny vintana ny famoronana fifandraisana, sady afaka mifalifaly amin'ny daty. Fantatro fa mety ho olona iray kozatra fivoriana wracking voalohany ka mamelà ahy hilaza aminareo kely miafina. Mahatsapa REHETRA natahotra amin'ny daty voalohany! Ka ny daty azo inoana fa hahatsapa ho toy ny matahotra ianao. Ara-dalàna ka manaiky hiala ny lelam-pitana. Raha tokony manahy momba ny selam-pitatitra mifantoka amin'ny mianatra zava-baovao momba io olona io eo anatrehanao, ary mieritreritra momba ny fanaovana azy ireo hahatsapa ho mahazo aina. Fomba izany dia ho hitanao fa tena mazava ho sasatra. Mazava ho azy fa raha nisafidy ny hanao asa-tanana araka ny voalaza etsy ambony izany dia afaka manampy anao haka aina. Rehefa mahatsapa ny tena toetra tony Hamirapiratra amin 'ny alalan. Fotsiny ny tenanao. Ianao indrindra no lavorary ianao.
Maka fahafinaretana - Tany amin'ny faritra andrefan'i kolontsaina isika rehetra handray niaraka toa tena zava-dehibe. Manadino ny nahita mihitsy raha toa ity olona ity dia mety fiainana mpiara-miombon'antoka amin'ny dingana ity. Voalohany DATE TSY Fa manome OUT RAHA tsara izy ireo olon-tiany / sipa KEVITRA. Izay tonga taty aoriana. Azo inoana fa tsy – daty voalohany indrindra tsy mitondra amin 'ny fifandraisana ary raha fantatrao izany dia mety hanampy anao ny fitantanana ny fanantenanao. Daty voalohany ireo fotsiny mba miala any fihaonana sy fifandrindrana amin'ireo olona vaovao, ary izy ireo ho an'ny voly, sady afaka mifalifaly. Teny an-dalana 'manana fahafinaretana' amin'ity raharaha ity dia tsy midika hoe mahazo tena mamo na manana firaisana ara-nofo, roa izay tokony ho sorohina amin'ny daty voalohany (raha tianao ny daty faharoa izay). Ho an'ny mpanjifa ny tokan-tena aho dia miasa miaraka amin'ny fahazoan-dalana hidirana foana nahazo avy any, ary niaraka tao amin'ny tena izao tontolo izao. Manoro hevitra anao aho, tena mamaky ny lahatsoratra momba miaraka toy ny fitsaboana ny hahafantatra bebe kokoa.
Fiarahana miala voly!
Ahoana no Iatrehana Taorian'ny Break Up
4 Dingana mba Alefaso ny Lavorary Voalohany Message amin'ny vehivavy iray
Ahoana no Hampifaliana Open Fifandraisana asa